VONO SY HERISETRA : Nogadraina vonjimaika ilay ramatoabe nampijaly ny zafikeliny tao Mampikony
Noho ny herisetra, vono isan’andro niampy fanandevozana nataon’ilay ramatoabe tamin’ny zafikeliny notezainy tao Mampikony, Faritra Sofia iny dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao voarainay omaly teo am-panoratana ny lahatsoratra fa naiditra am-ponja vonjimaika ny faha 02 avrily lasa teo ity farany. 6 avril 2020
Raha tsiahivina kely ny zava-niseho, ny faha 28 marsa, niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera facebook ny vono sy fampijaliana nataon’ilay ramatoabe tamin’ny zafiny notezainy. Zazavavikely antsoina hoe Ramamonjisoa Florence, mpianatra ao amin’ny EPP Ambalavavy Mampikony ity niharan’ny herisetra ity. Raha ny fanampim-panazavana voaray dia mbola velon-dray aman-dreny izy saingy toa tsy misy miraharaha ka dia notezainy ny bebeny. Fijaliana no niainany tao, toy ny famatorana amin’ny tady na koa dorana amin’ny afo, tsy omena sakafo, tsy mahazo mandeha any an-tsekoly.
Ireo no fitarainana sy tatitra nambaran’ireo mpiray vodirindrina amin’izy ireo mahita ilay tranga nandritra ny fanadihadiana natao. Indraindray aza moa dia alaina an-keriny any am-pianarana mihitsy ity zaza ity mba hampiharana ireo herisetra voalaza ireo. Taorian’ny famotorana lalina dia naiditra am-ponja vonjimaika ilay renibe ratsy fanahy raha ny vaovao voaray avy any an-toerana.
Tsara hatrany ny mampahatsiahy fa manameloka ary miady amin’ny herisetra miseho amin’ ny endriny maro samihafa ny fitondram-panjakana. Ramatoa Mialy Rajoelina no masoivoho ny FNUAP izay misahana ny vehivavy sy ankizy amin’izany ary vonona mandrakariva izy ireo mandray fepetra hentitra raha sendra ka mahita trangan-javatra mahonena eny anivon’ny fiarahamonina.